Odawaa oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Xananbuurre | KEYDMEDIA ONLINE
Odawaa oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Xananbuurre
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedka ka socda degaanka Xananbuurre ee gobolka Galgaduud.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, ayaa sheegay in ay ayaan darro tahay dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya degaannada Xananbuurre iyo Qalaan-qalle, oo wax ka yar Konton Kiiloo-mitir u jira caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb.
Cabdiraxmaan Odawaa, ayaa sheegay in uu Dhuusamareeb u tagay abuubulka sidii loo damin lahaa dagaalkaas wuxuuna dhamaan Madaxda Soomaaliya ee magaalada ku shirsan ugu baaqay in aysan idhaha ka dadan dagaalka oo ay ku baxaan.
Dagaalka u dhaxeeya labada beelood ee Xananbuurre ka holcaya ayuu Odawaa ku tilmaamay colaaddii la dhihi jiray kugu dhimay oo kaa dhimay, oo uu ula jeedo in kii dhinta iyo midkii dilaba ay walaalo yihiin.
Wax garadka labada beel, Madaxda Galmudug, Hoggaanka Habargidir, dadka degaanka iyo wax garadka Soomaalida oo dhan, ayuu ugu baaqay si dag dag ah loogu baxo degaanada lagu dagaalamyo si loo joojiyo colaadda.
“Baaq nabadeed ayaan u jeedinayaa beelaha walaalaha ah ee Cayr iyo Saleebaan ee dirirta macna la’aanta ah ku dhex marayso deegaanada Xananbuuro iyo Qalaanqale”. Ayuu yiri Cabdiraxmaan Odawaa.
Wuxuu intaas kusii daray, “Runtii waa colaaddii la dhihi jiray kugu dhimay oo kaa dhimay. Waxaan diyaar u ahay inaan ka qayb qaato sidii loo damin lahaa colaadaas. Waxaa kale oo aan ugu baaqayaa maamulka Galmudug, kan federaalka ah, wax garadka labada beelood, odoyaasha dhaqanka beel weynta Habar Gidir iyo inta samaha jecel in ay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dhiggaas macna darida ku daadanaya”.